Barnaamijyada Xafiiska Virtual, oo sidoo kale loo yaqaanno Barnaamijyada Xarunta Shirkadaha
Xafiis qaali ah waa adeeg bixiya cinwaanka boostada iyo adeegyada soo dhoweynta telefoonka. Shirkadda adeegsata adeegga xafiis ahaan malaha xafiiska. Caadi ahaan dhowr shirkadood ayaa adeegsada cinwaanka xafiiska casriga ah. Natiijo ahaan, adeegani wuxuu bixiyaa kayd weyn oo ka badan boosaska xafiiska caadiga ah iyo kharashka soo dhoweynta. Intaa waxaa sii dheer, dad badani waxay u isticmaalaan dejintan si ay u xafidaan sirta dhaqaale. Taasi waa, sidaa darteed hantida ku jirta shirkad ama LLC kuma xirna cinwaanka milkiilaha, sarkaalka ama agaasimaha.
Barnaamijka Xafiiska Virtual waa waxaa laga heli karaa dhammaan gobollada 50 Mareykanka iyo dalal badan oo shisheeye.
Saraakiisha Nominee iyo Agaasimayaasha
Adeegga asturnaanta ee Nominee waa halka mid ka mid ah la-hawlgalayaashayadu ka dhex muuqdo diiwaannada dadweynaha sida saraakiishaaga iyo agaasimayaasha shirkaddaada ama maamulaha LLC-kaaga. Adiga ayaa gacanta ku haya adiga oo haysta dhammaan xuquuqda codbixinta, adoo iska leh shirkadda. Waxaa xusid mudan, inaad haysato dukumintiga aad haysato oo muujinaya in shirkaddu adiga leedahay. In kasta oo, ka dib qof baa fiirinaya shirkaddaada ama magacaaga diiwaannada dadweynaha, ma arkaan wax xiriir ah oo u dhexeeya adiga iyo shirkaddaada. Sidaa darteed, waad ku yeelan kartaa koonto weyn oo bangiga ama kala go 'magaca shirkaddaada. Indhahayga indhaha si fudud uma heli doonaan.
Intaas waxaa sii dheer, iyadu si qarsoodi ah ayay kuu yeelan kartaa hanti maguurtada ah. Marka, maxay u baahan tahay qareen uqorista lacag gaareysa markuu arko hantidaada? Wax aad u yar Ma haysataa lacag kugu filan iyo hanti kale oo la soo bandhigo oo kaa dhigaysa inay kugu habboonaan karto? Waxay u eg tahay inaysan ahayn, haddii aad leedahay hantidaada qalabka ku habboon ee sharciga.
Faa'iidooyinka Xaqa ah ee Xafiiska
Waxaa jira faa iidooyin badan oo dhaxalka ah markaad ku daraan ama samee LLC. Gaar ahaan tani waa kiiska marka aad sameysid Nevada ama Wyoming LLC oo leh koonto bangi. Tani waa sababta oo ah sharciyada ilaalinta hantida ee labadan xukun waxay ka badan yihiin gobollada kale oo dhan. Xitaa waxaa jira faa'iidooyin ilaalin hanti oo weyn oo ka jira maamullada xeebaha, sida kuwa Nevis LLC. Iskusoo wada duuboo, ka faa'iidayso sharciyada ilaaliya saamileyda, saraakiisha iyo agaasimayaasha. Nevada iyo Wyoming ayaa ah kuwa ugu xoogan Mareykanka. Intaas waxaa sii dheer, majiraan canshuuro dowladeed oo dakhli shirkadeed labadan dowladood. Nevis waa kan ugu xoog badan adduunka oo dhan. Sidoo kale, ma jiraan wax canshuur ah oo dakhli ah oo ka jirta deegaankan caan ah. Hadda, dadka Mareykanka waxaa laga cashuuraa dakhliga adduunka, sidaa daraadeed taasi micnaheedu waa ma jiraan qaabab kale oo canshuureed dakhli oo ay ku xareynayaan xukunkaas.
Dadku badankood waxay u isticmaalaan Nevada, Wyoming ama kuwa ka baxsan xeebaha sababahan awgood:
U shaqeysii si uu ganacsi uga yeesho xaalada ay ku nool yihiin, ama,
· In la ilaaliyo hantida shakhsiga ah iyo in la kordhiyo macluumaadkaaga gaarka ah iyo xogdhowrka
Labadaas arrimoodba waxay kuu muujin karaan faa'iido aad u weyn ganacsigaaga. Laakiin waxa jira tillaabooyin aad qaadi karto si aad u xaqiijiso inaad aragto faa'iidooyinka aad filanayso. Intaas waxaa sii dheer, xitaa waad ku kobcin kartaa gargaaradahan adoo ku daraya adeegyada magacaabista si kor loogu qaado asturnaantaada sida aan kor ku soo sheegnay.
Nevada ama Wyoming Corporation ee Wadankaaga Hooyo
Shirkad laga sameeyay mid ka mid ah gobollada 50 waxay ganacsi ka sameyn kartaa dhammaan gobollada. Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad ku nooshahay Kaliforniya oo aad leedahay shirkad gawaarida qaada. Waxaad dooneysaa inaad yareyso waajibaadkaaga canshuurta oo aad ilaalin dheeraad ah u siiso hantidaada. Marka, waxaad u sameyneysaa Shirkadda Nevada Corporation shirkaddaada xamuulka, ka dibna iska diiwaangeliya California sida shirkad ajnabi ah. Tan waxaa loo yaqaan "shahaadada shisheeye." Gobolka Kaliforniya wuxuu canshuuraa daqli kasta oo laga helo gobolkaas.
Si kastaba ha noqotee, shirkaddaada weli waxay ku raaxeysan kartaa maqaarka canshuur la'aanta ee Nevada dakhli kasta oo laga helo gobolkaas. Sidaas oo kale ayaa loo sameynayaa dowlad kasta oo kale oo ay ku shaqeysay kuwasoo leh sharciyo canshuur ka madax banaan oo la mid ah, ama "shuruudaha aqoonsi shisheeye". Si aad ugu raaxaysato faa'iidooyinkaas cashuurta, hase yeeshe, waxay ahaan lahayd ganacsi “degane”. Shuruudaha aan hoos ku qeexnay ayaa go aansan doona tan.
Kordhinta Asturnaanta iyo Ilaalinta Hantida
Shirkadaha Nevada waxay bixiyaan asturnaan qarsoodi ah iyo ilaalin hanti qaali ah agaasimayaasha, saraakiisha, iyo milkiilayaasha (milkiilayaasha). Qawaaniinta, milkiilayaasha ama saraakiisha ama agaasimayaasha looma qaban karo wixii deyn ama deyn ah ee ay ku leedahay shirkadda Nevada. Mana aha magacyada milkiileyaashu magacooda inay yihiin wax diiwaan gelin guud ah. Kaliya Agaasimayaasha iyo Wakiilada Diiwaangashan ayaa ah arin laga duubay dadweynaha. Mid ayaa xitaa abaabuli kara jagooyinkan si gaar ah. Adigoo adeegsanaya magacaabista ballamaha, tusaale ahaan, qofku wuxuu kor u qaadi karaa sirta iyo qarsoodiga milkiilayaasha "runta" ee shirkadda. Adigoo adeegsanaya Adeegga Nominee ee aan aaminsanahay, waxaa laguugu hubin karaa in magacaaga loo xafidi doono si qarsoodi ah indhaha indho la’aanta ah.
Tusaale ahaan, waxaad ku bixin kartaa qaar ka mid ah ganacsigaaga iyo macaashka maalgashiga si toos ah Shirkaddaada Nevada. Tani waxay kordhin kartaa asturnaanta waxayna ilaalin kartaa hantida. Mid ayaa tan ku fulin kara sameynta shirkad ka sameysata gobolkaaga, ka dibna Shirkad kale oo ku taal Nevada. Shirkadda Nevada, ayaa iyaduna, loo isticmaali karaa in ay wax ka beddelato oo ay dakhli ka hesho shirkadda guryaha ee-gobolkaaga. Sidaas darteed, ganacsiga aad ka shaqeyso ee gobolkaaga guriga wuxuu ku kireysan karaa shirkaddaada Nevada. Tani waxay noqon kartaa waxyaabaha sida maamulka, la tashiga, ama iibinta sahayda ganacsiga, iwm.
Waxay buuxisaa Shuruudaha Joogitaanka Jirka
Sababta oo ah waxaad si sax ah ugu aasaasaysaa shirkadaada shirkad ahaan deganeyaasha Nevada (adoo adeegsanaya barnaamijkeena fudud, hufnaanta Nevada Office Program ama Nevada Virtual Office Program), iyo inaad u diyaarsato magacaabid sarkaal magacaabis ah oo loo maro Adeegga Asturnaanta ee Nominee, Hay'addaada ayaa kasban doonta lacagteeda si taxadar leh leh qarsoodi buuxda. Waxaad awoodi kartaa inaad naftaada ku siiso mushahar ka mid ah Nevada Corporation. Sababta oo ah cashuurta federaaliga ah ee Shirkadda C Shirkadu waxay aad uga yar tahay heerka shakhsiga ah ee ku dhowaad dhammaan lacagaha canshuuraha, waxaad xaqiiqsan kartaa canshuur celin dheeraad ah. (Mar labaad, haddii shirkad ka shaqeyso dowlad leh canshuurta dakhliga shirkadaha, waa iney raacdaa shuruucda canshuuraha ee ay ku shaqeyneyso. Tan waxaa ku jiri kara faa'idooyinka canshuurta aan canshuurta laheyn marka ay ka shaqeyso Nevada oo keliya. Ka hubi canshuurta aqoonta leh. lataliye).
Tusaale dheeri ah: Haddii aad leedahay maalgashi wax ku ool ah oo suuqa saamiyada, waxaad samayn kartaa shirkad Nevada Limited Liability Company (“LLC”) si aad u qabato maalgashiyadan. Markaa waxaad u diyaarin kartaa shirkaddaada ku taal Nevada inay maamusho maalgashiyadan, oo aad ku bixiso “khidmadaha maaraynta maaraynta” ee shirkadahaaga Nevada ka hesho maalgashiyadan oo loo maro LLC. Intaas oo dhan inta magacaagu aan loo diiwaangelin doonin sidii uu u kasban lahaa dhammaan waxyaabahaan, iyo canshuuraha aad qaali u ah, dakhliga.
Waa maxay Barnaamijka Xafiiska Virtual?
Si looga faa iideysto asturnaanta maaliyadeed ee ugu sarreysa, deyn xaddidan, iyo ilaalin hanti oo ay bixiso Shirkaddaada Nevada, waa inay buuxisaa shuruudaha “degenaanshaha” qaarkood. Waa inaad awood u yeelan kartaa inaad si ku filan u caddeyso in shirkaddaada sharci tahay, ganacsi ka shaqeysa Nevada.
Si taas loo sameeyo, waa in ay ka gudubtaa afarta baaritaan ee fudud:
Shirkadu waa inay lahaataa cinwaan ganacsi oo Nevada ah, oo wata rasiidyo, ama dukumenti taageeraya sidii caddeyn.
Waxay u baahan tahay lambarka taleefanka ganacsiga ee Nevada. 
Waa inuu haysto laysan ganacsi Nevada
Hay'adda ama LLC waa inay lahaadaan koonto Nevada Bank nooc uun ah (jeeg, koonto kala iibsi, iwm.).
Kartida Xaqiijinta Xafiiska Virtual
Sida ku cad shuruudahan, sanduuq PO Box fudud ama adeegga jawaabta kuma filna. Si looga gudbo muster, waa inuu jiraa xafiis nool, neefsanaya oo taageeraya Shirkaddaada Nevada. Xagga hoose ee furitaanka ka dibna sii haynta xafiiska ayaa ah inay noqon karto mid qaali ah, gaar ahaan haddii shirkadda ku sugan Nevada ay tahay istiraatiijiyad ku saabsan istiraatiijiyadda canshuur dhimistaada oo aad raadineyso inaad sare u qaaddo maalgashiga shirkadaada. Markaad xafiis furaysid, waa inaad sabab ka dhigto kirada, shaqaalaha, yutiilitida, adeegyada taleefanka iyo macluumaadka, canshuuraha shaqada, saadka, iyo caymiska. Aynu u soo galno kuwan aragti ahaan “bil kasta”:
Xafiiska Kirada $ 1500
shaqaalaha $ 3000
Telefoon & Xog $ 100
Dayactirka $ 100
Qalabka $ 200
Canshuuraha Shaqada $ 300
Caymiska $ 200
Kharashaadkan ayaa si dhakhso leh loogu kordhiyay heesaha $ 6,00 bishii. Xaqiiqdii, kuwanu waa qiyaasta qiimaha is-dhawridda, iyada oo kharashyada dhabta ah ee hadda jira ay aad uga badan yihiin. Ku dhufashada jaantuskan 12, oo waxaad arki kartaa in xitaa aasaaska “aasaaska howlaha” xafiiska ay ku kici karto shirkaddaada $ 72,000 sano ah.
Laakiin waxaan haysannaa xalka caqliga leh ee aan ku dabooli karno baahiyahaaga! Waxaan arrimahaas oo dhan u fulin karnaa shirkaddaada oo laga bilaabo markii ugu horreysay $ 995 illaa $ 2,995 sanadka oo dhan, waxay kuxirantahay xirmada aad doorato. Annaga oo adeegsanayna barnaamijkayada 'Nevada or Wyoming Office' (oo sidoo kale loo yaqaanno Nevada ama barnaamijka Wyoming virtual office), waxaan ku siin karnaa shirkadaada xafiis ku habboon iyo cinwaanka meheradda (oo lagu heli karo ballan), shaqaale ay qandaraas siinayaan dadka inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah, qof nool ayaa ka jawaabaya lambarka taleefankaaga ganacsiga (la wadaago) adeegga gudbinta waraaqaha ee shaqsiyeysan, iyo caawinta furitaanka akoonnada bangiga ama xisaabaadka tuugada. Waxaan ku bixinaa adeeg la mid ah goobo badan oo ka baxsan xeebahayaga.
Maxaa ku jira?
Waxaa ku jira Barnaamijka Xafiisyada Shirkadda Nevada Corporate Inc:
· Cinwaanka wadada Nevada ee dhabta ah - oo ay ka shaqeeyaan shaqaale qandaraas la leh 8am illaa 5pm
Waqtiga Baasifiga Isniinta ilaa Jimcaha.
· Adeegga dirista boostada oo shaqsi ahaan loogu talagalay baahiyahaaga
· Lambarka taleefanka la wadaago ee Nevada wuxuu ka jawaabey soo dhoweeyaha tooska ah
· Lambarka fakiska Nevada
· Caawinta furitaanka akoonka bangiga Nevada haddii aad rabto
· Caawinta codsashada laysanka Nevada
· Shaqaalaha qandaraaska tooska ah inay salaamaan kuwa soo wacaya inta lagu jiro saacadaha shaqada.
· Nootaayo adeeg
· Adeegga xoghaynta
Shirkadaha Isku-xidhka Nevada Virtual Office Program wuxuu kugu kici doonaa kaliya $ 110 bishii haddii aad bixiso bil bil ilaa bil iyadoo loo eegayo hal sano ugu yaraan ballanqaad, laakiin markale, waxaad ka faa'iideysan kartaa sicir-dhimista $ 325 ee sanad-dhaafka. Waxaad bixinaysaa $ 995 oo keliya sanad dhan oo adeeg ah.
Lacag keydinta xafiiska caadiga ah
Xirmooyinkan ayaa kuu badbaadin kara kumanaan kun oo kharashaadka hawlgalka ah, iyada oo la ilaalinayo dhammaan wixii aad shaqeysay, iyo gaaritaankii, canshuur dhimista.
Barnaamijkeena Xafiiska Shirkadaha ee Nevada wuxuu la kulmaa oo qanciyaa dhammaan heerarka lagama maarmaanka u ah go'aaminta shirkad deggan Nevada. Intaas waxaa sii dheer, adeegyadan waxaa loosoo gudbiyaa hab xirfad-xirfadeed aqoon leh, saaxiibtinimo leh. Shaqaale khibrad leh oo adeegyadan noocaa ah u hayey muddo ka badan 30 sano ayaa maareeya arrimahaaga. Marka, waxaan ku bixin karnaa barnaamijkan qiime qiimo leh sababtoo ah mugga sare ee ganacsigeenna iyo abaabulkeena.
Lambarka boggan ku yaal ama foomka kor lagu soo sheegay waxaa loo isticmaali karaa in lagu helo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan khiyaamada TAX SAVINGS iyo fursadaha PRIVACY ee laga heli karo Barnaamijka Xayeysiinta Shirkadaha Ku-Meelgaarka ah.